वर्षको अन्तिम शुक्रबार कहाँ के हुँदैछ ? « Janata Samachar
वर्षको अन्तिम शुक्रबार कहाँ के हुँदैछ ?
प्रकाशित मिति : चैत्र २९, २०७५ शुक्रबार
काठमाडौं । २०७५ सालको अन्तिम शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछ । वर्षको अन्तिम शुक्रबार केही राजनीतिक दलकाे घनिभूत छलफल देखि अन्य कार्यक्रम हुँदैछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको छ ।
बिहीबार साँझदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु चन्द्रागिरीमा छन् । छफलफमा प्रधानमन्त्री एंवम अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुनुहुन्छ । छलफलले आजै उपत्यका बिशेष कमिटी घोषणाको तयारी गरेकाे बताइएको छ ।
नयाँ वर्षको अन्तिम ‘गुड फाइडे’ दुई चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ । झरना थापाको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ र सम्राट शाक्यको कथा, पटकथा तथा निर्देशन रहेको चलचित्र ‘यात्रा’ पनि प्रदर्शन हुँदैछ ।
आर्थिक रुपमा टाट उल्टनेतर्फ उन्मुख भारतीय विमान सेवा कम्पनी जेट एयरवेजले काठमाडौं उडान आज देखि बन्द गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जेट एयरवेजले विमानस्थलको सेवा प्रयोग गरेबापत १८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) यू–१९ विश्वकप एक दिवसीय एशिया छनोट प्रतियोगिता आजदेखि मलेशियामा शुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा नेपालसहित टेष्ट नखेल्ने एशियाका छ राष्ट्रले सिङ्गल राउण्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र अङ्क तालीकामा शीर्षस्थानमा रहने एक टोली २०१९ जनवरीमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने यू–१९ विश्व कपमा पुग्नेछ ।